မတရားအဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့ ဖြိုးပြည့်စုံတို့ (၃) ဦးရဲ့ ကိစ္စကို ပန်ဆယ်လို ဒဲ့ဖဲ့ပြီ - Zeekwat Hot News
မတရားအဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့ ဖြိုးပြည့်စုံတို့ (၃) ဦးရဲ့ ကိစ္စကို ပန်ဆယ်လို ဒဲ့ဖဲ့ပြီ
October 9, 201904736
အဆိုတော် ဖြိုးပြည့်စုံနဲ့ တေးရေး ငြိမ်းချမ်းကို၊ ရော်နီဆန်းလွင်တို့ (၃) ဦးကို မူးယစ်ဆေးသတင်းအရ အောက်တိုဘာလ (၇) ရက်နေ့ ညနေ (၆) နာရီခန့်က မြန်မာပလာဇာတွင် ၀င်ရောက်ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခဲ့ပြီး (၂) ရက်ခန့် ထိန်းသိမ်းခံရပြီးနောက် အောက်တိုဘာလ (၉) ရက်နေ့မှာ မှားယွင်းစွာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာဖြစ်သလို ဥပဒေနဲ့အညီ ပြစ်မှုမမြောက်တာကြောင့် ပြန်လွတ်လာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ဒေါသထွက်နေကြတဲ့ ပြည်သူတွေထဲမှာမှ ပန်ဆယ်လိုလည်း ပါဝင်နေပြီး ဒီကိစ္စအတွက် အခုလို ၀ုန်းလာပါတော့တယ်။
“အဆိုတော် ဖြိုးပြည့်စုံပါ သုံးဦးကို လွှတ်ပေးလိုက်ပါပြီတဲ့။ ဖမ်းမိတဲ့ဆေးပြားတွေက မူးယစ်ဆေးဝါး မဟုတ်လို့ ဓါတုဗေဒဝန်ရုံးက ပြန်ကြားပါသတဲ့…. လွတ်မြောက်လာပြီဆိုတဲ့အတွက် အရမ်းဝမ်းသာပါတယ်။ မေးစရာ မေးခွန်းတွေ ရှိလာပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အပြစ်ရှိတယ် မရှိဘူး၊ မူးယစ်ဆေးဝါးဟုတ်မဟုတ် မသေချာဘဲ သတင်းအရဆိုတာနဲ့ လူကြားသူကြားထဲ သောက်ခွက်ရိုက်ပြီး ဖမ်းလို့ရတယ်ပေါ့… အဲ့ကိစ္စကို ရှင်းပြပါ။
Photo : ပန်ဆယ်လို
ခေတ်ကိုက ကော်ဖီဆိုင်ထိုင်ရင်း သကြားလုံးက အော်တို ကက်တမင်းဖြစ်ပြီး မျက်ခွက်ရိုက် အဖမ်းခံရနိုင်တဲ့ခေတ် မရတော့ဘူး… မတရားတွေ ကြည်ညိုနေပြီ ခြေသလုံးဖက်မိတော့မယ် အာားးးးးးး” လို့ လူမှုကွန်ယက်ပေါ်မှာ ရေးသားခဲ့ပြီးနောက် သူမရဲ့ပို့စ်ကို ၀န်းရံသူများပြားသွားခဲ့ပါတယ်။
ဇီးကွက်ပရိသတ်ကြီးရော .. ဖြိုးပြည့်စုံ အပါ သုံးဦးကို မှားယွင်းစွာ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရမှုအပေါ် ဘယ်လိုသုံးသပ်ချက်ပေးချင်ပါသလဲ။
Source : ပန်ဆယ်လို Facebook
အဆိုတျော ဖွိုးပွညျ့စုံနဲ့ တေးရေး ငွိမျးခမျြးကို၊ ရျောနီဆနျးလှငျတို့ (၃) ဦးကို မူးယဈဆေးသတငျးအရ အောကျတိုဘာလ (၇) ရကျနေ့ ညနေ (၆) နာရီခနျ့က မွနျမာပလာဇာတှငျ ဝငျရောကျဖမျးဆီးစဈဆေးခဲ့ပွီး (၂) ရကျခနျ့ ထိနျးသိမျးခံရပွီးနောကျ အောကျတိုဘာလ (၉) ရကျနမှေ့ာ မှားယှငျးစှာဖမျးဆီးခံခဲ့ရတာဖွဈသလို ဥပဒနေဲ့အညီ ပွဈမှုမမွောကျတာကွောငျ့ ပွနျလှတျလာခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။ ဒီအတှကျ ဒေါသထှကျနကွေတဲ့ ပွညျသူတှထေဲမှာမှ ပနျဆယျလိုလညျး ပါဝငျနပွေီး ဒီကိစ်စအတှကျ အခုလို ဝုနျးလာပါတော့တယျ။
“အဆိုတျော ဖွိုးပွညျ့စုံပါ သုံးဦးကို လှတျပေးလိုကျပါပွီတဲ့။ ဖမျးမိတဲ့ဆေးပွားတှကေ မူးယဈဆေးဝါး မဟုတျလို့ ဓါတုဗဒေဝနျရုံးက ပွနျကွားပါသတဲ့…. လှတျမွောကျလာပွီဆိုတဲ့အတှကျ အရမျးဝမျးသာပါတယျ။ မေးစရာ မေးခှနျးတှေ ရှိလာပါတယျ။ မွနျမာနိုငျငံမှာ အပွဈရှိတယျ မရှိဘူး၊ မူးယဈဆေးဝါးဟုတျမဟုတျ မသခြောဘဲ သတငျးအရဆိုတာနဲ့ လူကွားသူကွားထဲ သောကျခှကျရိုကျပွီး ဖမျးလို့ရတယျပေါ့… အဲ့ကိစ်စကို ရှငျးပွပါ။
ခတျေကိုက ကျောဖီဆိုငျထိုငျရငျး သကွားလုံးက အျောတို ကကျတမငျးဖွဈပွီး မကျြခှကျရိုကျ အဖမျးခံရနိုငျတဲ့ခတျေ မရတော့ဘူး… မတရားတှေ ကွညျညိုနပွေီ ခွသေလုံးဖကျမိတော့မယျ အာားးးးးးး” လို့ လူမှုကှနျယကျပျေါမှာ ရေးသားခဲ့ပွီးနောကျ သူမရဲ့ပို့ဈကို ဝနျးရံသူမြားပွားသှားခဲ့ပါတယျ။
ဇီးကှကျပရိသတျကွီးရော .. ဖွိုးပွညျ့စုံ အပါ သုံးဦးကို မှားယှငျးစှာ ဖမျးဆီးထိနျးသိမျးခံရမှုအပျေါ ဘယျလိုသုံးသပျခကျြပေးခငျြပါသလဲ။
Source : ပနျဆယျလို Facebook